News - Aan wax badan ka ogaanno weelka baakadaha dhalada ku jira.
Dhalooyinka dhalada waa dhalooyin ka samaysan alaabta ceeriin ee dhalada ah.
Waxaa jira midabbo badan oo dhalooyinka quraaradaha ah, oo ay ku jiraan dhalooyinka dhalada ah, dhalooyinka dhalooyinka cagaaran, dhalooyinka dhalada ah ee buniga ah, dhalooyinka buluugga ah ee buluugga ah, dhalooyinka galaaska cagaaran ee madow.
Waqtigan xaadirka ah, dhalooyinka dhalada cad ee hufan ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, waxaana jira noocyo badan oo wax soo saar ah. Qalabka ugu muhiimsan ee wax soo saarka dhalooyinka quraaradaha waxaa laga sameeyaa ciid quartz, ash ash, limestone, feldspar powder, borax, sodium nitrate, calcite, cullet, iyo waxyaabo kale oo ceeriin ah. Dareeraha ayaa lagu kala qaadaa 1550 ° --1600 ° si ay ugu dhalaasho alaabta ceeriin biyo dhalo galaas ah, ka dibna ay sameeyaan qalabka quudinta.
Aynu quusinno si aan wax badan uga ogaano ...
Dhalooyinka quraaradaha cad-cad ayaa sidoo kale lagu buufin karaa dhalooyinka galaaska cagaaran, dhalooyinka dhalada ah ee buniga ah, dhalooyinka dhalada cagaaran, iwm.
Waxaa sidoo kale laga baaraandegi karaa inuu barafoobo dusha dhalada dhalada ah.
Dhalooyinka muraayadaha ayaa ah kuwa ugu caansan uguna wanaagsan deegaanka wax soo saarka baakadaha, maacuunta qurxinta iyo miiska dhalada.
Maaddooyinka ceeriin ee dhalada ah ayaa sidoo kale ah kuwa ugu jaban alaabada wax lagu soo saaro ee lagu soo saaro dhalooyinka.
Weelasha dhalooyinka ayaa ku fadhiya boos muhiim ah baakadaha cuntada iyo cabitaanka.
Dhalooyinka waxaa loo isticmaali karaa baakadaha khamriga, baakadaha cabitaanka, baakadaha saliida, baakadaha cuntada qasacadaysan, baakadaha aashitada, baakadaha dawooyinka, dhalooyinka reagent, baakadaha faleebada iyo baakadaha qurxinta, iwm.
Weelka kulul ee lagu keydiyo cuntada ：
Dhalooyinka galaaska aan caadiga ahayn waxaa badanaa lagu arkaa nolol maalmeedka. Midabada hufan waxay muujinayaan nooc ka mid ah quruxda hufan. Dhalooyinka dhalada ah ee dawada midabkeedu yahay hufan ayaa si aad ah loo isticmaalaa ka dib marka la isticmaalo. Hadda macaamiishu waxay fiiro gaar ah u yeeshaan hagaajinta heerarka nolosha ee isku dhafka aadanaha, ku habboonaanta, moodada iyo dhadhanka.
Dhalada muraayadda hufan waxay leedahay af ballaaran iyo af dhuuban sida ku cad afka dhalada.
Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo loo isticmaalo dhalooyinka dhalada ah ee nolosha. Waa maxay isticmaalkaagu? Adeegsiga aan hadda u isticmaalo dhalooyinka muraayadaha hufan waxaa inta badan lagu isticmaala jikada, sida qabashada xilliyada sida cusbada, basbaaska, anise, MSG, iwm.
Ku saabsan tan dhalada cabitaanka iibka kulul ：
Dhalada dhalada waa weelka wax lagu cabbo ee sharaabka wadankeyga, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha lagu raaco oo leh taariikh dheer. Dhalada dhalada waxay leedahay heer sare oo hufnaan iyo iska caabin ah daxalka, mana beddeli doonto nooca xogta marka lagu taabto kiimikooyinka badankood. Xirfadaha wax soo saarkeedu waa fududahay, muuqaalkuna waa bilaash oo waa la beddeli karaa, adkaantu way weyn tahay, kulaylka u adkaysata, waa nadiif, waa sahlan tahay in la abaabulo, waxayna leedahay astaamaha dib-u-adeegsiga.
Waxaanan leenahay noocyo badan oo kala duwan Dhalo Cabitaan ah oo aad doorato:
Troy Trade waa shirkad xirfadle ah oo ka ganacsata weelka dhalada iyo xirnaanshaha qaraabada ee Shiinaha. Shirkadeena waxaa lagu aasaasay magaalada Xuzhou, Shiinaha sanadkii 2009 waxayna abuureysaa sumadeena WETROYES tan iyo sanadkii 2015. Intii lagu guda jiray sanadihii, waxaan dhidibnay iskaashi aad u xasiloon oo raaxo ku dheehan tahay oo aan la leenahay macaamiisha ka socota 30 + dal ...
Pickles Jar 10oz 300ml Embossed Glass Mason Dhalooyinka leh Birta Ku marooji 12/07/2021
75cc Cobalt Blue Dhalada Glass Farmashiye yar oo loogu talagalay Qiimaha Warshada Kiniinka 09/07/2021
Amber 500cc Dhalo Weyn oo Glass Farmashiye ah oo loogu talagalay Kiniinka Kiniinka 09/07/2021
Xulo Qeybta DHAQAALAHA Aqoonsiga Dhalada Aluminium AMBER Amber Amber Dhalada Dhalada ah Madow Jar Borosilicate BOSTON Wareeg galaas Dhalo Jar Glass Shumaca JARNAANTA NADIIF Cad Clip Jar Jar BULBIGA BULSHADA Buluug Cobalt Jar Glass kareem SOO SAARAN SANDUUQ Dhalo Saliid Muhiim ah Featured Alaabada Featured Dhalo fidsan Dhalo Flint Vodka XIRIIRKA MUUQAALKA CUNTADA Fagaaraha Faransiiska Qabow Gaasta Dhalada Kiniinka dhalaalaya Dhalada Muraayada Dhalada Dhalo Buufiyo Glass CAGAAR Dhalada Saabuunta Gacanta ah Lix geesood QALABKA Kaydinta JARKA Kombucha Daboolka & Koofiyadaha Dhalada Nolosha & Quruxda Dhalada Khamriga MAKIINADDA Sharoobada Maple MASON JAR weel jar Mason Jar Ku marooji Cap Dhalada Saliida KUWA KALE Dhalada Nalalka FARSAMADA Dhalada caaga ah Alaabta AFKA DARAN Af joogto ah Wareeg Caano Wareeg ah SHARIIF FILIM Qalabka silikoonka Jar dhadhan SQUARE TOBAN Dhalada muraayadaha SYRUP Daboolka Maroojinta Af Weyn Af Weyn Dhalo Khamri ah GACANTA
Qolka 816, Xafiiska Lanhai D Bldg, Xarunta Ganacsiga Lvdi, Degmada Yunlong, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha, 221006.
Qalabka baakadaha muraayadaha iyo weelasha waxay leeyihiin faa'iidooyin badan:
1. Maaddada muraayadda ahi waxay leedahay astaamo caqabad wanaagsan leh, oo ka ilaalin karta oksijiinta iyo gaasaska kale inay weeraraan waxyaabaha ku jira, isla mar ahaantaana looga hortago qaybaha is-bedbeddelaya ee ka kooban inay u beddelaan jawiga;
2. Dhalada maaddada dhalada ah ayaa si isdaba joog ah loo isticmaali karaa, taas oo yareyn karta qiimaha baakadaha;
3. Maaddooyinka muraayadda ayaa si fudud u beddeli kara midabka iyo hufnaanta;
4. Dhalada quraaraddu waa aamin iyo nadaafad, waxay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan iyo caabbinta aashitada aashitada, waxayna ku habboon tahay baakadaha walxaha aashitada leh (sida cabitaannada casiirka khudradda, iwm);
5. Intaas waxaa sii dheer, maxaa yeelay dhalooyinka quraaradaha waxay ku habboon yihiin soo saarista khadadka wax soo saarka ee otomaatigga ah, horumarinta aaladda dhalada quraaradaha gudaha iyo tiknoolajiyada tooska ah ayaa sidoo kale qaan-gaar ah, iyo isticmaalka dhalooyinka dhalada ah ee lagu xirayo cabitaanka miraha iyo khudradda ayaa leh hubaal. faa'iidooyinka wax soo saarka ee Shiinaha. Dhalada dhalada weelka baakadaha cabitaanka ee wadankeyga, muraayada sidoo kale waa nooc ka mid ah waxyaabaha baakadaha oo leh taariikh dheer. Iyada oo ay jiraan alaabooyin badan oo baakidh ah oo ku soo qulqulaya suuqa, weelasha dhalooyinka ayaa wali ku jira boos muhiim ah oo ku jira baakadaha sharaabka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakadaha ee aaladaha kale ee wax lagu rido aysan beddeli karin.
Muraayada Soda-lime waxay ka samaysan tahay quartz sand (SiO2), ash ash (Na2CO3), limestone (CaCO3), feldspar, iwm. Waxaa lagu dhalaalay 1550 ~ 1600 ℃, waa la qaabeeyey, oo si deg deg ah ayaa loo qaboojiyey si loo soo saaro walxo amorphous amorphous Solid ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay kiimikada waa mid aad u adag, inta badan SiO2 (oo ku saabsan 72%), Na2O (oo ku saabsan 15%) iyo CaO (oo ku saabsan 9%), iyo qadar yar oo ah Al2O3, MgO, K2O, iwm. galaaska soodhaha ama soodhada galaaska lime. Muraayadaha soodhada badanaa waxay ka kooban yihiin wasakh badan, sida wasakhda birta, sidaa darteed galaaska caadiga ah badanaa wuxuu leeyahay midab cagaar khafiif ah. Muraayadaha soodhada waa ku jaban yihiin qiime ahaan, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhismaha iyo alaabada galaaska maalinlaha ah. Albaabka iyo muraayadda daaqadda ee aan inta badan isticmaalno waa inta badan dhalooyinka soodhaha ama alaabada qoto dheer ee warshad soodhaha ah. Kala duwanaanta dhoobada, galaaska caadiga ah waa waxyaabo isku mid ah oo isotropic ah oo leh jir amorphous amorphous ah. Marka lagu daro muraayadda soodhaha ah ee aan inta badan nolosha ku aragno, waxaa jira noocyo kale oo muraayad ah. Sida:
(1) Kalibaalium galaasiyam galaasiya dhalada waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu badalayo qayb ka mid ah sodium oxide-ka soodhada galaaska iyada oo lagu beddelayo potassium oxide isla markaana si haboon loo kordhinayo waxyaabaha ku jira silikon oksaydhka galaaska ku jira. Waxay leedahay adkaansho sare iyo dhalaal wanaagsan, waxaana sidoo kale loo yaqaan dhalo adag. Galaasyada loo yaqaan 'Potassium galaas' ayaa inta badan loo isticmaalaa soo saarida qalabka kiimikada, maacuunta iyo waxyaabaha muraayadaha ee horumarsan.
(2) Macdanta `` Lead Lead '' galaaska leedhka waxaa kaloo loogu yeeraa miisaanka miisaanka, leedhka muraayadda biraha ah ama muraayadda dhalada ah. Adoo kudaraya qiyaastii 24% ka mid ah xabagta macdanta "PbO" galaaska caadiga ah, galaaska leedhka ayaa la sameeyaa. Muraayadda noocan ah waxay leedahay culeys gaar ah oo gaar ah (oo culus oo taabashada ah), tilmaam ballaaran oo soo jiidasho leh (lixda midab oo midabbo badan leh oo soo gudbin kara muuqaalka), iyo adkeyn aad u sarreeya (iska caabinta abrasion). Waa shey ku habboon samaynta maacuunta-dhamaadka sare, qurxinta iyo farsamada gacanta.
(3) Muraayada Quartz Quartz galaasku waxay ka samaysan tahay silikoon oksaydh leh hufnaan sare, taas oo leh caabbinta heerkulka sare ee wanaagsan, xasiloonida kuleylka iyo guryaha indhaha, iyo sidoo kale xasiloonida kiimikada wanaagsan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa soo saarida qalabka indhaha iyo qalabka kiimikada. Intaa waxaa dheer, waxaa jira noocyo badan oo muraayad ah, sida muraayadda boron ...